दिदीसंगको रंगिन रात - Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » दिदीसंगको रंगिन रात
दिदीसंगको रंगिन रात
शान्ति दिदी निकै सेक्सी । गोरी, बाटुलो अनुहार अनि ठूल्ठूला दुधका पोका हल्लाउँदै मस्किदै हिड्थिन। उनिसंगै एउटै फ्ल्याटमा बस्दा कहिल्यै घुँडा छोप्ने लुगा लगाएको देखिन। उनका लुगा जहिल्यै उनका अशान्त अंगको कामुकता झल्काउने गरि हुन्थ्यो। ड्रेसअप र मेकअप बिना नै सेक्सी दिदी झन् बाहिर निस्कने बेला त मिनिस्कर्ट कि त वानपिसमा च्वाँक भएर हिड्थिन।
बेलुकी अफिसबाट फर्कनासाथ म उनको कोठामा जान्थे। उनी पनि खुसीखुसी बोलाउने गर्थिन। उनी रोचक कुरा गर्थिन, म जोक सुनाउथे, अनि उनको तारिफ गर्थे। खासमा उनी अफिसबाट फर्कने बित्तिकै फेरी छोटा लुगामा सजिएर बस्थिन, खुकुलो टिसर्ट लगाएकी हु्न्थिन, यसो निहुँरिदा उनका सेता दुध स्पष्ट देखिन्थे, त्यहि हेर्ने लोभमा दिदीको कोठमा धाउने गर्थे। तर बिचारी उनलाई के थाहा !
उनका ती सेता साँप्रा अनि ठूला दुध सम्झदै हस्ते हान्ने बाहेक कोठमा फर्केपछि अर्को मन हुन्थेन। तर साइडकै कोठामा सुगन्धित एक सुन्दरी अनि आफु सधै आफ्नै आफैले चलाएर प्यास मेटाउन सधै मन पनि नहुने। तर दिदी गरम न, भनेर सिधै भन्न पनि नमिल्ने । फेरि अलि कडै स्वभावकी थिइन, सिधै त्यसो भन्ने आटँ पनि आएन।
यसरी नै उनको कोठमा जाने क्रम दिनहुँ सामान्य झै चल्दै थियो। एक पटक उनकै खाटमा पल्टेर मोबाइल चलाउँदै बसेको थिए। शान्ति दिदी नुहाएर आउँछु भनेर बाथरुम तिर गइन। उनले खाटमा फुकालेर गएको लुगा सुघ्दै आफ्नो लिङ्ग चलाउन थाले। दिउँसो उनले अफिस जाँदा लगाएको त्यो लुगामा उनको पर्फ्युमको बास्ना थियो। पेन्टीमा उनको योनीको बास्ना झनै सुगन्धित थियो। मस्त उनका सुगन्धित शरिरको कामुकता सम्झदै लिङ्गले निकालेरको फुसी उनकै पेन्टीले पुछेर राखिदिएँ।
उनको शरिरको वास्ना पाएपछि अब उनी प्रतिको भावना अझै बलियो हुन थाल्यो। राती सपनामा पनि उनीलाई नै देख्न थाले। घरी उनीसंग अंगालोमा हुन्थे, घरी उनको चिल्ला साँप्रामा आँखा गाडेको हुन्थे भने कहिले अस्पष्ट सपना देख्थे, उनलाई चिकेको हुन्थे।
बिहान उठ्दा अब लाडो ठनक्क ठन्केको हुन्थ्यो । उठ्नासाथ शान्ति दिदीसंगै उनको बास्ना याद आउन थाल्यो । एक तरिकाले शान्ति दिदीप्रति मेरो प्रेमको भावना बलियो हुन थालेको थियो। प्रेम पनि कस्तो, शारिरीक प्रेम, उनको अंग प्रतिको प्रेम, उनको बास्ना प्रतिको आकर्षण अनि उनका दुध देखि तिघ्रासम्मको आकर्षण ।
उनको कोठामा जाने क्रम बढ्न थालेको थियो। उनीसंग निकै कुरा सेयर हुन थालेको थियो। दिदी पनि मेरो उपस्थितिमा ‘युज टु’ नै भइसकेकी थिइन। पहिले उनी अफिसबाट फर्केपछि मात्र जाने गर्थे, तर बहिना उनी अफिस जानु अघि पनि म उनकै कोठमा हुन्थ्ये। उनी यति सम्म युज टु भइसकेकी थिइन कि अब अफिस जाँदा लुगा लगाउने क्रममा पनि मलाई बाहिर जान भन्थिनन्, मलाई उता फर्क है म लुगा फेर्छु भनेर लुगा चेन्ज गर्थिन।
पहिले उनले आफ्नो टिसर्ट फुकालिन । उनको सेतो सर्लक्क परेको ढाडमा केवल उनको कालो ब्राको हुक देखियो । उनको ढाडको बिचमा रहेको त्यो माथी देखि तल सम्मको मेरुदण्ड भएको ठाउँको खाल्डो सहित उनको पुरै ढाड यस्तो सेक्सी थियो कि अहिल्यै उनीलाई झम्टौं अनि उनका ती सुकोमल अंगको स्वाद चाखौं झै लाग्यो।
अनि उनीले आफ्नो मिनिस्कर्ट फुकालिन। उनी निहुरिदाँ उनको पुठ्ठो यस्तो स्वादको देखियो कि लाडो एकैसाथ ठिनिक्क भयो। निहुरिएर उनले खुट्टाबाट मिनिस्कर्ट निकालिन। उनको रातो पेन्टीको एउटा सानो त्यान्द्रोले उनको चाकको प्वाल ढाकेको थियो। बाँकी उनको पुरै नाङ्गो शरिर देख्दा मन सिरिङ्ग भयो। लाडो ठनक्क भएर अन्डरवेयर छेडेर बाहिरै आउला जस्तो भयो।
उनले सर्ट लगाउन थालिन। सर्टसंगै उनका ती सेता चिल्ला साप्रामा केवल पेन्टीमात्र देखिएको उनको त्यो दृश्य सायद कयौं दिनसम्म छोल्दा काम आउने थियो। उनले पाइन्ट लगाएपछि उनी फेरि त्यही चञ्चली दिदी भइन। तर उनको सेक्सीनेसमा भने कुनै कमी देखिदैन्थ्यो। टिपिक्क फिटिङ सर्ट र पाइन्ट उनको चाक र अगाडी दुध स्पष्ट देखाउने गरि शरिरमा कसिएको थियो।
उनले लुगा लगाइसक्नासाथ मेलै ध्यान मोबाइलमा सारे। म र उनीसंगै कोठाबाट निस्कियौं । म आफ्नै कोठातिर लागे। उनी अफिस लागिन। कोठामा फर्कनासाथ पहिलो पटक देखेको उनको त्यो पछाडीको नग्न शरिर सम्झदै जोडले छोले।
दिन बित्दै गए, बिहान सधै शान्ति दिदीको त्यो सेक्सी नग्न शरिर उनकै कोठमा बसेर हेर्न पाइदैनथ्यो। तर उनको त्यो देख्दै चिक्न मनलाग्ने अंगहरु देख्दा उनलाई समातेर उनको पुतिमा ठोक्ने चाहना भने बढ्दै जान थाल्यो।
एक दिन बेलुका ७ बज्दा सम्म शान्ति दिदी अफिसबाट फर्किइनन्। बेलुका नआउने भए फोन गर्थिन वा बिहान यहाँ यसरी जाँदैछु भनेर मात्र अफिस जाने गर्थिन। ८ बज्यो, ९ बज्यो। १० बजेपछि फ्ल्याटको ढोकामा ढकढक सुनेर ढोका खोल्न गएँ। खोल्नासाथ दिदी हुत्तिएर मसंग ठोक्किइन। राताराता आंखा बनाएर मतिर हेरिन अनि हाँसिन। कुन पार्टीमा गएकी थिइन, रक्सीले फिट भएर आइछिन्।
उनको कोठासम्म पुर्याए। उनलाई खाटमा पल्टाए । अनि रक्सीको तालमा गफ दिन थालिन। दिदीलाई यस्तो कामुक त पहिले देखेको थिइन। रक्सीको मातमा उनका गाला राता भएका थिए। उनको आँखामा यस्तो मोहक देखिएको थियो, क्या क्युट देखिएकी थिइन दिदी।
म आफ्नो कोठामा जान उठे । उनले च्याप्प हात समातिन ।
‘हेल्प मि !’, उनले मादकपनको साथ बोलिन।
‘के मा ?’
‘लुगा खोल्नलाई ।’, उनी मुस्काई।
म झसङ्ग भए। । हो ती स्तन अनि त्यो रातो पेन्टी भित्र लुकेको पुति चिक्ने रहर कति छ त्यो मलाई मात्र थाहा छ तर दिदी रक्सीले मातेकी छिन् । फेरी भोलिपल्ट केही भन्ने हुन कि । रक्सीले मातेको बेला मेरो फाइदा उठायौ भनेर भोलिपल्ट सन्किइन भने त उनको कोठामा पस्न पनि पाइन्न। म दोधारमा परे।
‘नो । सुत्नु तपाई’
‘किन नो ! मैले फुकालेको बेला त…. खुब स्वादले हेर्छौ ।’
‘कहिले हेरे र?’
‘मैले नदेखेको हो र ?’ दिदी मुस्काइन।
बस् त्यति चाहिएको थियो। उत्तानो परेर सुतेकी दिदीको सर्टको बटन झटपट खोले र पाइन्ट खोल्न पटक्कै समय लागेन। कालो ब्रा र कालै पेन्टीमा उनको शरिरको सुन्दरता मापन गरिसाध्य थिइन। हातले उनको दुध ब्राको बाहिर बाटै खेलाउन थाले। शान्ति दिदी आंखा चिम्म गरेर आनन्दमा डुब्न थालिन।
उनका ती स्तन पहिलो पटक समाते। आहा ! कति सफ्ट । हत्तपत्त उनको ब्रा फुकालेर सिधै दुधको मुन्टा चुस्न थाले। उनको जिउ उत्तेजनाले खाटामा तल माथी सर्किन थाल्यो। दिदीको दुधबाट एक मिठो सुगन्ध आउँदै थियो। लाग्थ्यो उनको दुध त सधै यसरी नै चुसिराखौं। दिदी सेक्सी पाराले आफ्नो ओठ टोक्दै थिइन । म झटपट उनको ओठ तर्फ लम्के। उनले आँखा खोलिन। मैले उनको ओठमा स्पर्श गरे। अनि किस गर्न थाले। त्यसपछि उनको ओठ, जिब्रो चुस्न थाले। दिदीले मेरो जिब्रो चुस्न आफ्नो ओठ अगाडी ल्याइन अनि दुवै ओठले जिब्रो समातेर जोडले भित्र तानिन। मुखबाट ‘क्वाच क्वाच’ साउन्ड आउन थाल्यो । निकै बेर दिदीले मेरो ओठ चुसिन अनि मैले दिदीको चुसे।
उत्तानो परेकी दिदीमाथी म लम्पसार सुतेको थिए। मेरो ठन्किरहेको लाडोले दिदीको योनी माथी दबाब दिदै थियो। दिदीको घाँटी, दुध, पेट हुँदै तलसम्म किस गर्दै आए। दिदीको पेन्टी पुरै भिजिसकेको थियो। म निकै हतारमा थिए। तर दिदीको यौवन र हरेक अंगको मज्जा लिन चाहन्थे।
दिदीको पेन्टी पुक्क उठेको थियो अनि भिजिसकेको थियो। दिदीको पेन्टी नजिक मुख पुर्याए । ओहो कस्तो बास्नादार। पेन्टी बाहिरबाटै दिदीको पुतिमा ओठ पुर्याए अनि जिब्रोले चलाए । बिस्तारै दिदीको पुतिमा औलाले चलाए। दिदीले सुस्तरी आवाज निकाल्न थालिन ।
दिदीको पेन्टी फुकाले। उनी पूर्णत नग्न भइन । आंखा चिम्लेर उत्तानो परेकी दिदीको शरिर नियाले। दिदीको चट्ट गोरी थिइन, निधार, आँखा अनि मिलेका नाक । देख्ना साथ टोक्न मनलाग्ने ओठ। सर्लक्क परेको घाँटी। अनि त्यसमा बटारिएका उनका कपाल । थल-थल परेका तर उत्तानो पर्दा फैलिएको देखिने उनका पुष्टिका स्तन, बारुले कम्मर अनि उनका पुष्ट उठेका थौरै रौँ भएका रातो पुति । संगै जोडिएका चिल्ला साँप्रा अनि उनका हात र खुट्टाका सर्लक्क परेका लामा लामा औँला देख्दा एकैपटक सबैकुरा सक्न मन लागेन।
लुगा फुकालेर म नाङ्गिए । अनि दिदीको स्तन दुई हातले समातेर मेरो लाडोलाई च्यापे। ती नरम स्तनको स्पर्शले जिउँ सिरिङ्ग भयो। दिदीले आँखा खोलिन। अनि दुवै स्तन आफैले समातिन। दिदीको दुधमा चिक्न थाले। लाडोबाट निस्किएको पानीको कारण दुधको बिचमा लाडो लुत लुत तलमाथी गर्थ्यो। अनि दिदीले दुधले च्यापेर लाडोमा तलमाथी चलाइदिन थालिन। असह्य हुन थाल्यो।
लाडो ठन्केर फलाम जस्तो कडा भएको थियो। दिदीलाई फेरि किस गर्न थाले । अनि दिदीको मुखमा लाडो घुसारे। दिदीले निकै स्वादले लाडो चुस्न थालिन। मलाई त्यतिले पुगेन। अनि ६९ पोजिसनमा आफुलाई राखे। दिदीको पुति पहिलो पटक चुस्न थाले । दिदी मेरो लाडो चुस्थिन म दिदीको पुति। दिदीको पुतिबाट निस्किएको पानी चाटे अनि जिब्रोले टिसी चलाउन थाले। दिदी झन् झन् मेरो लाडो आफ्नो मुखको भित्र पुर्याउथिन। लाग्थ्यो सबै अहिलेनै निस्किन्छ। निकै बेर दिदीको पुति चुस्दै गए। दिदी घरि घरि आफ्नो शरिर चलमलाउँथिन। म जोडले दिदीको मुख भित्र लाडोले धक्का दिन्थे ।
केही बेरमा दिदीको मुखबाट निकालेर दिदीको पुतिमा लाडो हुले। ओहो, बल्ल थाहा भयो यस्ती च्वाँक केटीको पुति चिक्नु भनेको के रहेछ। भिजेर चिप्लो भएको पुतिमा कडा बनेको लाडो लुत् लुत् पस्दा दिदीको आवाज तेज हुँदै गयो। ‘ओ…ओ….अह…फास्ट फास्ट…’
म दिदी माथी मच्चिन थाले।
‘क्वाँच क्वाँच….’ जति माथीबाट पेल्थे दिदी त्यति चाक उठाउँदै माथी धक्का दिन्थिन।
खाट लचक लचक हुदै थियो। त्यहि रिदममा दिदी सेक्सी आवाज निकाल्थिन। ‘अँ…अँ….फक मि, फक मि….’
‘अझै अझै…..चिक मलाई…. भाइ छिटो छिटो…’
निकै बेर दिदी माथी मच्चिए। दिदी स्खलित हुन थालिन। पुति पानी पानी भइसकेको थियो। म अझै उनको पुति च्यातिने गरि चिक्दै थिए। मलाई उनको पुति बाँकी राख्नु थिएन। नियन्त्रण गरेर छिराइरहेको मैले पुरै पुरै लाडो छिर्ने गरी चिक्न थाले। ‘ओहो… मम्मी’, एङ्गल मिलेर पुरै छिर्दा दिदीलाई दुखेछ।
उनले च्याप्प हातले लाडो समातिन। उनी केही पटक स्खलित भइसकेकी थिइन। मलाई रोक्न मन थिएन। मैले अझै जोड गर्न थाले । उनी थाकिसकेकी थिइन। पुति च्यातिने गरी दिन थाले। चर्को स्वर निकालिन, ‘गड…पुग्यो पुग्यो…’
मलाई पनि लागेको थिएन यति लामो समय म आफै टिक्न सक्नु जस्तो। तर सायद उनको यौवन चुस्न केही बाकी राख्न मन नलागेर होला, अनि उनलाई सम्झेर यतिका महिना छोलेको काम कहिले लाग्ने । आखिर प्राक्टिस मेक म्यान पर्फेक्ट !
दिदीको पुतिबाट लाडो सुत्त निकाले। उनले लामो स्वास फेरिन।
म भर्खर सुरु हुँदै थिए।
दिदीलाई साइडमा पल्टाए । चिप्लो भएको लाडो दिदीको चाकको प्वालमा घुसारे। ‘हुन्न हुन्न !’ दिदी चिच्याइन।
चाकको प्वालमा लाडो छिर्न मानेन। एक पटक जोडले पेले। ‘ऐया…भाइ के गरेको ! मलाई पुग्यो छोड !’
दिदी अर्को तिर फर्कन लागिन। उनको कपाल समाते अनि आफु तिर ताने । ‘ऐया…ऐया….छोड मलाई !’
उनको साँप्रा थोरै उठाए अनि प्वालमा मिलाएर जोडले दिए। दिदीको मुखमा पेन्टी कोचेर दुवै हात जोडले समाते । रक्सीको मातमा उनले बल लगाउन सक्थिनन्। उनी छटपटिन थालिन। लाडो सुत्त छिर्यो । म जोड जोडले धक्का दिन्थे। दिदी फुत्नक जोडले बल लगाउँथिन। केही सट मज्जाले त्यो टाइट प्वालमा चिके।
झट्ट उनको हात छोडे । उनले पेन्टी मुखबाट निकाल्न लाग्दा मैले फेरि पुतिमा छिराएँ। यो पटक निकै कडासंग छिराएँ। ‘दुख्यो के….मलाई पुग्यो… म सुत्छु छोड मलाई ‘
‘मलाई पुग्या छैन। एक छिन खप्नु न।’
‘भो..भो…’ मैले पुरै बलले धक्का दिए। ‘ऐयाँ….’
केही सट छिराएपछि एकाएक उनको मुखमा लाडो कोचे। उनले टोक्न खोजिन। पुतिमा प्याट्ट हिर्काएँ। अनि लुत लुत मुखमा चिक्दा चिक्दा सबै फुसी भित्रै निकाले । महिनौको प्यास मेटियो। उनी लमतन्न खाटमा सुतिन। त्यो दिन उनकै खाटमा उनको दुध सुघ्दै सुते।
(Visited 394 times,7visits today)
दिदीसंगको रंगिन रात, दिदीसंगको रात
Usko Thulo Chak ma Chikda
पुष्टिएकी सेक्सी बहिनीलाई चिक्दा